Qorshe Sir ah oo Sucuudigu la damacsan yahay Turkiga.!!!! | Dalka Times - News and Politics
Home LOCAL Qorshe Sir ah oo Sucuudigu la damacsan yahay Turkiga.!!!!
Qorshe Sir ah oo Sucuudigu la damacsan yahay Turkiga.!!!!
Hay’adda CIA & aqalka Congress’ka Maraykanka ayaa ku qancay warbixinta ay soo bandhigeen Turkida ee ku saabsan dilka Jamaal. Sidoo kale CIA iyaduna warbixin ay soo saartay ayay ku sheegtay inuu Maxamed Bin-Salmaan amray dilka wariyaha uuna lahaa fikradda howl-galinta xubnihii dilka gaystay.
CIA warbixinta ay soo saartay waxay tiri “Ma jirto sabab la’aan ay arrintan ku dhici karto Maxamed Bin-Salaam oo aan ogayn ama aan ku lug-lahayn”. siday horay u daabacday jariiradda Wadhington Post.
Siday ku warramayaan Imaaraatigu “Waxaa muuqata in madaxda Sucuudigu ay sii xumaynayaan xiriirka, oo ay bilaabeen inay Erdogan ula dhaqmaan sidii nin cadow oo kale ah, sidaas waxaa iclaamiyay Boqor Salaam isagoon ka laba-labayn. Taas waxaa caddayn kara in ammar la siiyay guddiga talo-bixinta shirkii Ururka Golaha Islaamka ee ka dhacay Makka 14-kii, May aanu soo dhaafnay oo aan wax casuumaad ah loogu dirin Mr Erdogan, shirkaasoo ay kasoo qayb-galeen wufuud heerkoodu sarreeyo.
“Waan ognahay waxay Sucuudigu samaynayaan, dhammaan waa lawada ogyahay, waxaa kuu caddayn kara warfaafinta Sucuudiga taageerta iyo midda ay iyagu leeyihiin” sidaas waxaa u sheegay jariiradda Middle Easty Eye saraakiil Turki ah oo ku macneeyay falalka Sucuudigu ku kacayo ee hakinta ganacsi RAAD-GURID.
Saraakiishu waxay kaloo dheheen,”Dalxiiskii imaanayay hoos ayuu u dhacay, waxaan kaloo dhibaato ku qabnaa ganacsigii dhoofinta Turkiga ee Sucuudiga tagaysay, arrinta si dhow ayaan ula soconnaa”.
“Tusaale ahaan, Istanbul, waxaa ka buuxa daxliisayaal Sucuudi ah, Sucuudigu ha eegaan BBC codbixinta ay ka diyaariyeen Bariga Dhexe iyo sumcadda uu madaxweyne Erdogan ku leeyahay gobolka, kaddib waxay ogaanayaan inay guul-darraysanayaan”.